Radio Marii: Gaaffii fi Deebii Gaazexeessaa Zalaalam Gamachuu; Seenaa Haaj Aadam Saaddoo | GadaaTube
Radio Marii: Gaaffii fi Deebii Gaazexeessaa Zalaalam Gamachuu; Seenaa Haaj Aadam Saaddoo
Tags/Credits: Haaj Aadam Saaddoo, Radiyoon Marii, Zalaalam Gamachuu
Radio Marii: Gaaffii fi Deebii Obbo Bekele Nega (OFC) – K/1ffaa
Radio Marii: G/D Dr. Mohammed Hassan (K/ 1ffaa); G/D Aadde Nuhaamin Biqilaa (K/ 3ffaa)
Radio Marii 7-8-2012
Radio Marii – Gurraandhala 3, 2013
Credits/Tags: Haaj Aadam Saaddoo, Radiyoon Marii, Zalaalam Gamachuu
8 Responses to "Radio Marii: Gaaffii fi Deebii Gaazexeessaa Zalaalam Gamachuu; Seenaa Haaj Aadam Saaddoo"
Beeka Biyyaa December 17, 2012 at 3:27 am
Raadiyoona marii: Keessummaa siyaasaa wayyaanee malee siyaasaa Oromoo hin jaallanne nuuf dhiheessitanii? kkkkkk
Siyaasa hin jaalladhu jedhe. Garuu siyaasa wayyaanee fi gahee mootummaa wayyaanee baay’ee ol kaasee nutti himuuf yaale.
AFEWORKI December 17, 2012 at 4:37 pm
Yaadi Gaazexxessaa Zalaalam Gammachuu kuni sirrii dha. Waanuma dhugaa osoo asiif achi hin jallisne dubbatte. Garuu Namoonni siyaasaa oromoo (OLF), yaadi kuni hin fudhatamuuf. Osoo aanjaan fi dirree bilisa biyya Ethiopia keessatti uumamee illee, kana booda biyya TPLF bulchitu keessatti seera wayyaaneen tumte kabajanii karaa seera qabeessa qabsa’uu akka kufaatii guddaatti fudhatu. Akka gadi-aantummaatti ilaalu. Garuu, mootummaa nama nyaataa akka Shabiya (Eritrea) ti maxxananii fi warra Eritrea tiin ajajamaa fi tuffatamaa jiraachuu akka qabsootti fudhatanii itti boonu.
OPDO ergamtuu TPLF dha, dhaaba wayyaaneen bixxilte dha. Akkuma atuu jette, sabboontonni hedduun OPDO keessa ni jiru. Qaawwaa argamteen Oromoo gargaaruuf kan yaalan hedduu dha. Garuu OLF duula guddaa OPDO irratti gaggeesse har’a OPDOn maqaa malee akka jarmayaatti hin jirtu.
Warri amaaraa ANDM (bihaden) keessatti of-ijaaranii aangoo tooftaan TPLF irraa fudhachuun, mootummaa amaaraa deebisanii ijaaruuf dalagaa jiru. Oromoon garuu alas hin jiru, manas hin jiru.
Dhaabbileen oromoo akka OFDM fi ONC akka hin jabaanneef warri OLF tooftaa adda addaan irratti duulanii hojii ala godhan.
Kanaaf furmaanni maali???
====> Of-gowwoomsuu fi abjoochuu dhiisnee ija banannee dhugaa dirree irra jiru ilaaluu dha.
1) Bobaa fi to’annaa Shabiyaa (Eritrea) irraa jalqaba of-bilisoomsuu. Sochii fi leadership qabsoo Oromoo bakka Shabiyaan to’atu irraa fageessuun dhaaba jabaa fi of-danda’u ijaarrachuu.
2) Hala qabatamaa irratti hunda’uun, qabsoo hdhannoo dhiibbaa alagaa irraa walaba ta’e finiinsuu YKN yoon TPLF mootummoota akka USA, EUROPE, …duratti waada seentee dirree polotikaa walaba uumteef, gara biyyaa galanii karaa nagaa ummata oromoo waliin qabsa’uu.
3) Har’a Oromoon 20000 oli kan hidhaatti tortoraa jiru, sabab Oromoo/OLF ta’eef osoo hin taane, sababa indirectly Shabiyaa tumseefi dha. Yoo OLF dhaaba shabiyaa irraa walaba ta’e, TPLF oromoo deeggaraa shabiyaa jettee yakkuu hin dandeessu.
Walumaagalatti, abjuun gulufuu osoo hin taane, dhugaa jirtu ilaaluu feessisa.
dhugassa baalle December 17, 2012 at 10:06 pm
Warri radio marttin waa jechu barbbaddan free midia jechu beektu moo warra numalle beekaan hinjiru jedhu sani gamma hunddan gotta oromo yaddachun badi mal qaba sayffi shane mallaqaa keenaan dhabatte sabontotta oromoo balallefattu ormoni ejano kee sirrefadhu loogii gandda dhiissi jeneen malle akka baddu hin barbaanu kanaa fuu ofsirreessa deemma baddi irran badi hin umina
libaan December 18, 2012 at 7:23 am
qophesitota radiyo marii,akkam jirtu?oromo midiya garii barbachisa ture.isiin amoo qophii dhihesa jirtan irrati akka gariti wantaa irrati qophoftan hin fakatan.yeroo tokko tokko midia irruma jirachu ni dagatu fakata,hosofini isin jalaa badaa.meshan sagale ittin warabdan garii mitii(saund editera garii fe`adha pc kessanirati)wanti dhihesitan xiqatus gudatus qulqulesato akka guraa namaa hawatuti dhihesa.
Hamilee fi humna itti fixatanif garu galatoma.kabajaa gudan isiinif qabaa wantuma akkana nuf siresa.gargarsa kan fetan yoo ta`e isiin walin jira….galatoma.
Dhugaa December 18, 2012 at 9:32 am
Yeroo Gaazexeessaan kun sagalee Ameriikaa Kophii Afaan Oromoof Finfinnee irraa dabarsaa ture nama hojii isaa dinqisiifachaa ture keessaa ani tokko, Wayitan gaaffii fi deebii isaa kana dhaggeeffadhe garuu isa moo isa miti kan jedhu gaaffiitu na keessa bule. Nami kun utuu akkuma “siyaasaa hin beeku” jedhee geelloon jalqabe isumaan xumuree gaarii ture. Yookaan ammoo siyaasaa Oromoo hin beeku jedhee dansa. Mallattoo nama abdii kutatee keessaa tokko, ofi ykn saba ofii dhiisanii alagaa jajuu dha. Obbo Zalaalamis akka nama abdii kutatee Pro,Masfiin isa uummata Oromoo akka diina innikaatti ilaaluu fi Oromoon miilla Lamaan lafa irrallee deemuu hin jaal’annee fi Dr Biraanuu Nagaa isa ifaa ifatti qabsoo Oromoo bal’eessuuf qabsoo jalqabuu isaa himate nutti jaje.
Egaa Obbo Zalaalam jarri kun seera mootummaa Itoophiyaa fudhatanii qabsaawan jette. Hata’u malee jijjiirraan isaan fidan maaltu jira ? Mootummaa Dimookraatawaa hin taane waliin yeroof malee haga dhumaatti hojjetanii bu’aa tokko buusuun akka hin danda’amne baruu qabda.
Kan biraa waa’ee dhaabbilee Oromoo seera Mootummaa Itoophiyaa fudhatanii biyya keessaa hojjetanii dhaadessitee nuuf himuu kee ti. Dhaabbileen Lamaan kun bu’aa isaan Oromoof buusan garuu nuuf hin himne. Akka ilaalcha kootti Oromoof utuu hin taane Mootummaa Wayyaaneef bu’aa guddaa buusaniiru. Attamittiin yoo jette, Mootummaan kun akka inni dimokiraatawaa fakkaatu taasisaniiru.kan kana irraa hafe,hiriira nagaa tokko qindeessuu fi Oromoo hidhame tokkollee hiiksisuu hin dandeenye. Kanaaf seera wayyaanee isa Oromoon jalatti gabroomaa jiru fudhatanii mootummaa abbaa irree jalatti hojjechuu jechuun caalmaatti ummata ofii balaaf saaxiluu dha.
OPDO irraa fagaachuun hin ta’u waan jettu fakkaatta. Akkasumas Miseensotni OPDO warri Oromoof quuqaman qabsoo Oromoof aarsaa ta’aniiru waan jettu fakkaatta. OPDOtti dhiyaatanii Oromoodhaaf furmaata tokko finna warri jedhan garri caalu akka mana hidhaa jiranii fi biyyaa akka bahan quba qabdaa? Wareegamni OPDOn Oromoof baaste isa kam ? Hajaja diina harkaa fudhatanii Lammii ofii hidhuu fi dararuu dhaa?
Obbo Zalaalam yoo seera Itoophiyaa isaOromoon jalatti garboomaa jiru fudhattan ofumaa fudhaa malee Oromoon fudhatu hin jiru. Isinii fi warri isin fakkaatan ammoo mirga guutuu qabdu.
Malaalchaa December 19, 2012 at 6:17 pm
Nagumaa qoopheessitoota Radio Marii!?
Yeroo tokko tokko waan isin dhiheessitan nama ajaa’ibsisa. Ammoo Gaarii dha. Gazexeessaa Zelaalme Gammachuu waliin xaba isin taasiftan dhaggeeffadheen jira. xabichi Qumnagara baayyee of keessaa qaba. Kan gurra qabu haa dhaga’u jedhe oromoon!
dhugassa baalle December 25, 2012 at 3:41 am
Aduynaa tanarrati kessatu21 cenchry keessa namma gossa tokko labssa deeme bilssa bahe hin gare kannaafu oromotta hinaaffa sistamnii nujalla fudhtamee dhissa ergaa kayoon Oromo galin issa tokko ta e tan fuldurra issin hindhibini issnis kayyo namaan dogogrssu fetanin itti fufaa Oromonni tarssimoo yookaan toftta adda qabattanii gadii bahnis malla yeroo walin deemu qabattani gaddi dufan mala warra akka keessanii miaso idu eccat ehap jedhin hanga dadhbnaan olf jedhni hangoo dhunfattifi qabssahan akka hin taane raggan issan kaleessa dinna keessa warrana fudhtani issnitti baqattan Oromof akka rakko hangoo hinqabne Oromo biratti iffadha marre dhugaa iffa jiru dhiftani kayoo jaltii dhokatani ormo daldalu dhissa isnis gama kessaniin issans gama issanittn yoo hauyu tatan gama lamanin siyaasaa gama heddun galma geeti beekaa ijjaa oromon banatte maqaa kaayoottin hin jamsina damaqqa yokan nama beekee rafe damaqsun namadhiba nuhindhibina nudhiissa nudhiissa
caaltuu October 23, 2013 at 11:32 am
waan ani ajaa’iba nati ta’e kessaa Obboo Zalaalami if kan inni gaadisa isaan irra qabaa jiranilleen ummata kana gowwosuu fetani maaliif jenaan woyyaanee kalessa yeroo humnna qaban dadhabanii biraa bayan hardha yeroo hummna dhabanii sorama bayanitti akkamiin woyyaanee! namaa fi mirga ilma namaa kan jedhu hin beeyne kana akka laafati hojjiin galanii hojachuun nidanda’amaa jettanii namati haguuguu yaalta ufumaaa ufitti wol gowoomssaa ummata Oromoo dhiisaa!!!!